Lacagaha ugu waawayn ee dijital ah ee 2021. Liiska ugu sarreeya ee lacagaha dijitaalka ah ee ku yaalla suuqa suuqa February 2021 qiimaha qiimaha dhammaan shinnadaha la soo saaray (soo saarista) suuqyada suuq-madow.
Ugu sareeya 10 suuqyada ugu waawayn ee dijital ah ee suuqa kala iibsiga ee USD.
Liisaska lacagaha dijitaalka ah ee ku yaalla suuqa suuqa February 2021
Sarrifka lacagaha ee digital
Bitcoin (BTC) 952 321 323 702 $
Ethereum (ETH) 184 490 105 503 $
Cardano (ADA) 39 003 979 650 $
Binance Coin (BNB) 38 289 876 681 $
Tether (USDT) 36 280 380 632 $
Polkadot NEW (POLKADOTNEW) 34 435 001 438 $
XRP (XRP) 20 565 176 531 $
Litecoin (LTC) 12 810 165 327 $
ChainLink (LINK) 12 402 419 913 $
Bitcoin Cash (BCH) 9 911 224 169 $
Lacagta ugu weyn ee loo yaqaan 'lacagta digital' waa adeegga websaydhka 'cryptoratesxe.com' oo muujinaya lacagaha ugu sarreeya ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' oo leh kala-baxa ugu badan, qiimaha dhammaan qadaadiicda la soo saaray.
Adeegga tooska ah ee internetka "kan ugu weyn ee loo yaqaan" lacagta digital "wuxuu adeegsadaa ilo furan oo laga helo isweydaarsiga lacagta digital wuxuuna soo bandhigayaa qiimeynta lacagaha ugu weyn ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' waqtiga dhabta ah.
Lacagta digital weyn ayaa loo qaddariyo qiimaha dhammaan qadaadiicda ay abuurtay lacagta digital this. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu kala saaro qiimaha hal qadaadiicda ah lacagta qadaadiicda oo dhan iyo kaabsinta lacagta lacagta digital.
Si ka duwan ah "Lacagta dhaadheer ee ugu weyn" adeeg, kaasoo muujinaya qiimaha dhammaan lacagaha qadaadiicda, Lacagta ugu qaalisan ee lacagta adeeg wuxuu muujiyaa crypto oo leh ugu badnaan hal qadaadiic.
Qiimaynta lacagaha ugu waaweyn ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' ayaa isbeddelaya khadka tooska ah, maadaama ganacsiga ku saabsan isweydaarsiga lacagta digital uu socdo, oo heerka sarrifka lacagta digital uu isbedelayo. Tirada lacagta qadaadiicda ah ee la soo saaray, arintu sidoo kale maaha joogto.
Isticmaal adeegga "ugu weyn" crypto iyo khadka tooska ah.
Liiska tirada ugu weyn ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' ee loogu talagalay March 2021
Liistada aaladaha lacagta ugu weyn ee loogu talagalay March 2021 waxaa wakiil ka ah xulasho 10 cryptos ah oo loo kala soocayo kala-sarreeyn iyo ka yar, oo hoos udhacaya qaabka xarfaha waaweyn.
Cabbirka ama qiimaha loo yaqaan 'crypto' waxaa lagu soo bandhigay doolar isbarbardhig fudud.
Qiimaynta aaladaha lacagta ugu weyn waxaa loo bandhigay March 2021. Awood-siinta waxaa si joogto ah ula socda adeeggayaga.
Soo booqo bartayada internetka oo adeegso adeegga ugu sarreeya ee aaladaha lacagta ee March 2021.
Lacagta dhaadheer ee ugu weyn 2021
Lacagta digital ugu weyn ee 2021 waa adeega websaydhka tooska ah ee bilaashka ah kaasoo soo bandhigaya khariidadaha ugu weyn ee loo isticmaalo 2021.
Muunad ah 'cryptos waaweyn' ayaa soo socota 2021, laakiin waxaan si faahfaahsan u qiimeynaynaa 3-dii bilood ee la soo dhaafay. Heerka iyo u soo deynta crypto wey is beddali kartaa maalin kasta, sidaa darteedna qiimeynteena ugu sarreysa ee "Lacagta ugu qaalisan ee lacagta 2021" ayaa is beddeli kara maalin kasta.
Aaladaha lacagta oo leh qulqulaya ugu badnaan.
Aaladaha lacagta oo leh qulqulka ugu badan - qiimeyntayada loogu talagalay qiimeynta qiimaha dhammaan qadaadiicda lacagta digital kasta. Qadaadiic waa hal unug oo caadi ah oo loo xisaabiyo. Way iska cadahay inaad bixin karto iyo saamiga lacagta qadaadiicda ah.
Sidaa daraadeed, qiimeynta lacagaha loo yaqaan 'aaladaha lacagta' oo leh qiimaha ugu badan ee lacagta qadaadiicda ah ama qiimeynta lacagaha ugu weyn ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' waa mid shuruudaysan.
Marka lagu daro cabirka lacagaha loo yaqaan 'lacagta digital', waxaa habboon in la tixgeliyo tirada macaamillada qadaadiicadan iyo tirada isticmaaleyaasha ugu weyn ee loo yaqaan 'crypto'.
Shaxda ugu weyn ee aaladaha lacagta.
Jadwalka ugu weyn ee aaladaha lacagta - oo muuqaal ahaan u soo bandhigaya qiimeynteena sare ee crypto-ka ugu weyn.
Miiska shaashadda ugu weyn waxaad ku arki kartaa magaca lacagta digital iyo sarrifka doolarka Mareykanka.
Markaad gujiso mid ka mid ah aaladaha lacagta ugu weyn ee shaxda, waxaa lagu geyn doonaa bogga oo leh macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan arrinta iyo qiimaha dhammaan lacagaha aaladaha lacagta ee lacagtan.
Shaxda ah aaladaha lacagta ugu weyn.
Shaxda ugu weyn ee loo yaqaan 'lacagta digital chart' waa qalab kale oo bilaash ah oo internetka ah kaasoo soo bandhigaya darajada ugu sarreysa ee aaladaha lacagta ugu weyn.
Jaantusyada lacagaha ugu waaweyn ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' waxay muujinayaan sicirka 10ka sare ee crypto ee qiimaha ugu sareeya.